Nke a bụ Jaguar fighter na-ahụ maka nku ya kapịrị ọnụ! Anyị agbakọtala ọtụtụ add-ons iji nweta ngwaahịa ikpeazụ. Ogwe ahụ zuru oke, na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Anyị meziri ụda ndị ahụ. Nweta ọtụtụ ndị agha French. Eweghaara foto a Tel Aviv na ezigbo eziokwu. Nnọọ aka. Ihe ịtụnanya nke ụgbọ elu. Budata ya ugbu a!
The Alpha Jet bụ a agha ugbo elu imewe Franco-German (Dassault Aviation - Dornier), maka ọzụzụ ma ọ bụ n'ala agha. A rụrụ ya banyere 500 nkeji ji site a iri na abuo mba dị iche iche, na ìgwè dị ka Patrouille de France kemgbe 1981.
The rụpụta nke prototypes Jaguar na oru na October 1966 na March 1967, ndị Adour ya mbụ ule on ule bench. January 9, 1968, na French Minister nke ogba agha na Minister nke Defence na London bịanyere aka ka 400 ugbo elu maka nzube hà French Air Force na Royal Air Force. The factory Jaguar ama ada itie ke 17 April 1968. Ugbu a afọ, mgbe o mbụ ụgbọ elu, na ugbo elu Jaguar omume na-gbanwetụrụ na ụlọ akwụkwọ ebelatakarị ya RAF ọzụzụ ugbo elu iji na ihu ọma nke kenkwucha version. Na 1970, na Jaguar omume na-otu ugboro ọzọ gbanwere: aba chọrọ RAF ọzụzụ ugbo elu na ya na-eduga ná kenkwucha ugbo elu ntukwasi Jaguar.
Onye edemede: www.alhpasim.co.uk